ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ တက်ကြွမှုကို ဘယ်အချက်တွေက ပျက်စီးစေသလဲ - Myanmar Network
ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ တက်ကြွမှုကို ဘယ်အချက်တွေက ပျက်စီးစေသလဲ
Posted by Kyawt K Khine on August 24, 2015 at 10:56 in သုတ/ရသ ဆောင်းပါးများ
လူတိုင်းကိုယ်စီမှာ မျှော်လင့်ချက် ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလှုံ့ဆော်မှုပေး နေတဲ့ စိတ်ဓာတ်တက်ြွကစရာ ရည်မှန်း ချက် တစ်ခုခုပဲဖြစ်ဖြစ် ရှိနေတတ်ကြ ပါတယ်။ အဲဒါက ဘ၀နေထိုင်မှုအတွက် ရည်မှန်းချက် တစ်ခုခုဖြစ်နိုင်သလို၊ ငွေကြေးဥစ္စာ၊ အလုပ်အကိုင်၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေးစတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေက ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်အားထက်သက်မှု၊ စိတ်ဓာတ်တက်ြွကမှုတွေနဲ့ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေတတ် ပါတယ်။
အခုဖော်ပြမှာကတော့ လုပ်ငန်းခွင် အတွင်းမှာ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အားတက်ြွကမှု တွေကို ပျက်စီးတွေတဲ့အပြုအမူ၊ အပြော အဆိုစတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ လုပ် ငန်းခွင်အတွင်းမှာ မန်နေရာတစ်ယောက် ကပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အလုပ်ရှင်အကြီးအကဲက ပဲဖြစ်ဖြစ် ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ တက်ြွကလှုပ်ရှား မှုတွေကို ပျက်စီးစေတဲ့ အပြူအမူတွေကို အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ပြုလုပ်နေတယ်ဆိုပါတော့။ အခုဖော်ပြမယ့် အချက်တွေကတော့ ဝန် ထမ်းတွေရဲ့ တက်ြွကမှုတွေကို ပျက်စီးစေ တဲ့ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါ တယ်။ သင်က မန်နေဂျာ တစ်ယောက်၊ ဒါမှမဟုတ် ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဆို ရင်တော့ ဒီအချက်တွေကို အထူးသတိ ထား ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံးခေါင်းဆောင်မှုရဲ့ လျှို့ ဝှက်ချက်ကတော့ ဝန်ထမ်းတွေအပေါ် ရိုး သားတာပါပဲ။ အခုဖော်ပြမယ့် အချက်တွေ ကိုဖတ်ရှုပြီး ကိုယ်ကဝန်ထမ်းတွေရဲ့ တက်ြွကတဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေကို ပျက်စီး အောင်ပြုမူနေမိသလားဆိုတာကို ဆန်းစစ် ကြည့်စေလိုပါတယ်။
ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ လမ်းညွန်ှပြသ ပေးရုံပါပဲ။ အသေးစိတ်အချက်အလက် တွေကအစ လိုက်လံပြောဆိုနေတတ်တာ က ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့ အလုပ် မဟုတ်ပါဘူး။ ဝန်ထမ်းတွေကို ယုံကြည်မှု ပေးကြည့်လိုက်ပါ။ သူတို့တွေကို လုပ်ပိုင် ခွင့်ပေးကြည့်လိုက်ပါ။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ အရေးမကြီးတဲ့ အသေးအဖွဲ့ကိစ္စကအစ စီမံခန့်ခွဲမှုပေးနေတာက ဝန်ထမ်းတွေ အတွက် စိတ်ကျဉ်းကြပ်စေပါတယ်။ အ လုပ်ခွင်မှာ ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်မှုရှိရှိ လုပ်ရ မယ့်အစား ခေါင်းဆောင်ရဲ့ အသေးစိတ် ကအစ လိုက်လံပြောဆိုတတ်တာတွေ ကြောင့် ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ စိတ်အားထက် သန်မှုတွေ၊ စိတ်ဓာတ်တက်ြွကမှုတွေ ပျောက်ကွယ်သွားရတတ်ပါတယ်။ ဒီအ ချက်ကိုလည်း သတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အရေးမကြီးတဲ့ အစည်းအဝေးတွေနဲ့ အချိန်ဖြုန်းတာ
ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ တက်ြွကမှုတွေကို ပျက်စီးစေတဲ့အရာတွေထဲမှာ အရေးမကြီး တဲ့ အစည်းအဝေးတွေခေါ်ပြီး အချိန်ဖြုန်း တဲ့အချက်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ အစည်း အဝေးတစ်ခုမှာ လိုအပ်တဲ့သတင်းအချက် အလက်တွေကို ပြောတာနည်းနည်း၊ မလို အပ်တဲ့ ကိစ္စတွေလိုက်ပြီးပြောနေတဲ့ အချိန် က ခပ်များများပြောနေပြီဆိုရင်တော့ ကိုယ်က ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ် တက်ြွကမှုတွေကို ဖျက်စီးပစ်နေတာနဲ့ တူ တူပါပဲ။ ဘယ်သူမှ စိတ်မဝင်စားစရာ ကောင်းတဲ့ အရေးကိစ္စတွေအတွက် အချိန် ပေးပြီး နားမထောင်ချင်ကြပါဘူး။
ကိုယ်က အလုပ်မှာ ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်ဆိုရင် အကောင်းမြင်တဲ့ စိတ် နေသဘောထားနဲ့ အကောင်းမြင်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားယူသင့်ပါတယ်။ လူရယ်လို့ ဖြစ်လာရင် အမှားမကင်းတာ သဘာဝပါပဲ။ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက် က အဲဒီအမှားကို ခွင့်လွတ်ှတတ်တဲ့စိတ်ကို မွေးမြူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အမှားတွေကို အာရုံစိုက်မယ့်အစား သူတို့တွေရဲ့ အောင် မြင်မှုတွေကို အသိအမှတ်ပြုနိုင်အောင် ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ ဒီအချက်က သူတို့ တွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်တက်ြွကမှုတွေကို တည် မြဲအောင် လုပ်ဆောင်ပေးပါလိမ့်မယ်။
ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခု ခုအတွက် ကမ်းလှမ်းမှုတစ်စုံတစ်ရာပေး ပြီး အဲဒီကတိကိုမထိန်း သိမ်းနိုင်တဲ့အခါမှာ လည်း ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ယုံကြည်မှုတွေ၊ တက်ြွကမှုတွေ ပျက်စီးစေတာကို အထူး သတိထားသင့်ပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်အ ကြီးအကဲတစ်ယောက်ရဲ့ ကတိစကားက အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ ပေးပြီးသား ကတိတစ်ခုကို မတည်နိုင်တဲ့ အခါမှာ ဝန် ထမ်းတွေရဲ့ လေးစားမှုတွေ ပျက်စီးနိုင်သလို အလုပ်ခွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကြိုးစားသမျှ မျှော်လင့်ချက်မဲ့သွားသလို ဖြစ်သွားတတ် ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်က ခေါင်း ဆောင်တစ်ယောက်၊ ဌာနတစ်ခုရဲ့ အကြီး အကဲတစ်ယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုပါက ကိုယ့်ရဲ့ ကတိတစ်ခုကို တည်နိုင်အောင် ထိန်းသိမ်း ရပါမယ်။
ဝန်ထမ်းတွေကို ခွဲခြားပြီး ပေါင်းသင်းတာ
ဒီအချက်ကလည်း ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်း တွေရဲ့ တက်ြွကမှုတွေပျက်စီးစေတယ်ဆို တာ သတိပြုစေလိုပါတယ်။ ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဝန်ထမ်းအားလုံးက ကိုယ့်ရဲ့ ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ပြီး တစ်အုပ်စုထဲ အောင်မြင်တဲ့ ပန်းတိုင်ဆီ အရောက်လှမ်း နေတယ်ကြတယ်ဆိုတာကို သတိပြုစေလို ပါတယ်။ ဒီလူကတော့ ငါနဲ့အဆင်ပြေလို့ ငါ့ရဲ့ လူလို့၊ ဟိုလူကတော့ ငါနဲ့အဆင်မပြေ လို့ ငါ့ရဲ့ လူမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံ မှုမျိုး မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ကိုယ့်လက် အောက်က ဝန်ထမ်းအားလုံးက ကိုယ်အ နှစ်သက်ဆုံးလူတွေလို့ တွေးထားမယ်ဆိုရင် ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ စိတ်အားတက်ြွကမှုတွေ ကို ပျက်စီးစေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လုပ်ငန်း ခွင်မှာ ကိုယ့်အကြီးအကဲတစ်ယောက်ရဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုခံရတဲ့ ဘယ်ဝန်ထမ်းမဆို သူ့ရဲ့စိတ်အားတက်ြွကမှုတွေ၊ ပျော်ရွင်ှမှု တွေ ပျောက်ဆုံးကုန်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတိုင်းအတွက် ချီးမွမ်းဂုဏ်ပြုခြင်းမရှိတာ
လုပ်ငန်းခွင်မှာ အောင်မြင်တဲ့ လုပ် ဆောင်မှုတိုင်းအတွက် အသိအမှတ်ပြု ချီးမွမ်းဂုဏ်ပြုတာကို မခံရတာကလည်း ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှုတွေ ပျောက်ဆုံးတတ်ပါတယ်။ အသိအမှတ်ပြု ခြင်းက လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာ ဝန်ထမ်း တွေ စိတ်အားတက်ြွကမှုအတွက် အရေး ကြီးတဲ့ သော့ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သတိပြုစေလိုပါတယ်။ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ကြိုးစားစွမ်းဆောင်မှုတိုင်းအတွက် တန်ဖိုး ထားမှုအားနည်းတာကလည်း သူတို့ရဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှုကို လျှော့ကျစေပါ တယ်။
ကြိုးစားအားထုတ်မှုတိုင်းမှာ အသိ အမှတ်ပြုမှု၊ တန်ဖိုးထားမှုဆိုတာကို ဝန် ထမ်းတိုင်းက မျှော်လင့်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မျှော်လင့်ထားသလို အသိအမှတ် ပြုမခံရတဲ့အခါ အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်အားထက်သန်မှုဆိုတာ တဖြည်းဖြည်း နဲ့ ကွယ်ပျောက်လာတတ်ပါတယ်။ ကိုယ် က အလုပ်ရှင်တစ်ယောက်ဆိုရင် ဒီအ ချက်တွေကိုဖတ်ပြီး ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ခွန် အားတွေ၊ စွမ်းရည်တွေ၊ လုပ်ရည်ကိုင်ရည် တွေကို မပျက်စီးအောင် သတိပြုနိုင်လိမ့် မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
Permalink Reply by Tin Nwe Oo on August 24, 2015 at 23:28
sure I agree it .
Permalink Reply by lwin mar oo on August 25, 2015 at 8:52
all right, Thanks you.
Permalink Reply by Kyi Zar Thin on August 25, 2015 at 12:12
Permalink Reply by Nilar on August 28, 2015 at 9:05
Permalink Reply by Aye Myat Mu on August 29, 2015 at 10:58